Howlgal laga sameeyay Jowhar & Taliska Booliska oo ka hadlay - Radio Risaala: Somali News Online
Hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch ayaa sheegtay inay heshay caddeymo muujinaya in ciidamada Eritea ay "dembiyo dagaal" ka gesteen gobolka…
Home Wararka Howlgal laga sameeyay Jowhar & Taliska Booliska oo ka hadlay
Howlgal laga sameeyay Jowhar & Taliska Booliska oo ka hadlay
Taliska Ciidamada Booliska magaalada Jowhar ee Caasimadda Hir-Shabelle ayaa faah fahin ka bixiyay howlgallo dad lagu qabqabtay oo Ciidamada saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen halkaasi.
Taliyaha Saldhiga Booliska magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay, isla markaana si joogto ah looga sameeyo Gudaha iyo daafaha Magaalada.
Waxaa uu ku amray dadka ku nool Magaalada Jowhar in qof walba uu gurigiisa hortiisa uu Nal ku xiro si looga wada qeyb qaato sugida Amniga Jowhar oo kamid ah meelaha ay ka dhacayaan doorashooyinka labada Aqal.
Taliyaha Saldhiga Booliska magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa ugu baaqay Odayaasha Dhaqanka iyo Hay’adaha Garsoorka Magaalada Jowhar inay u Cadaalad falaan dadka Shacabka si Ciidamada ugu fududaato inay waajibaadkooda gutaan.
Hadalka Taliyaha Saldhiga Booliska magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa kusoo aadaya xilli saacadihii la soo dhafay warar soo baxayay ay sheegayeen in Al-Shabaab ay joojiyeen Gawaarida raashinka uga keeni jiray Magaalada Muqdisho.
Previous articleBarcelona siday ugu dhawaatay Mbappe, sheeko xiiso leh
Next articleDowladda oo sheegtay in howlgal lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab
Hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch ayaa sheegtay inay heshay caddeymo muujinaya in ciidamada Eritea ay "dembiyo dagaal" ka gesteen gobolka...